के तिनीहरूले मलाई चर धितोमा हस्ताक्षर गर्न जबरजस्ती गर्न सक्छन्?
जब पनि धितो सम्झौता गरिन्छ, पहिलो विकल्पहरू मध्ये एक निश्चित वा परिवर्तनीय दरहरू बीचको निर्णय हो। यो सजिलैसँग तपाईंले लिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू मध्ये एक हो, किनकि यसले तपाईंको मासिक भुक्तानीहरू र समयसँगै तपाईंको धितोको कुल लागतलाई असर गर्नेछ। जबकि यो प्रस्ताव गरिएको न्यूनतम दर संग जान प्रलोभन हुन सक्छ, यो त्यति सरल छैन। दुबै प्रकारका धितोहरूका फाइदा र बेफाइदाहरू छन्, त्यसैले तपाईंले निर्णय गर्नु अघि निश्चित-दर र चर-दर धितोले कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ।
निश्चित-दर बंधकहरूमा, ब्याज दर अवधिभर समान हुन्छ। ब्याजदर माथि जान्छ वा तल जान्छ भन्ने फरक पर्दैन। तपाईको धितोको ब्याज दर परिवर्तन हुने छैन र तपाईले प्रत्येक महिना उही रकम तिर्नुहुनेछ। स्थिर दर धितोहरूमा सामान्यतया चर दर धितो भन्दा उच्च ब्याज दर हुन्छ किनभने तिनीहरू स्थिर दरको ग्यारेन्टी गर्छन्।
त्यहाँ धेरै गृह ऋण विकल्पहरू छन्। यसमा भुक्तानीको प्रकार (उदाहरणका लागि, "मुद्दा र ब्याज" बनाम "ब्याज मात्र") र ब्याज दर समावेश छ। यस लेखमा हामी ब्याज दरहरू र उनीहरूले कसरी धितो ऋणलाई असर गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा केन्द्रित छौं।
एक निश्चित-दर धितो ऋण एक हो जसमा ब्याज दर एक निर्दिष्ट अवधिको लागि लक गरिएको छ (अर्थात, निश्चित) सामान्यतया एक र दस वर्षको बीचमा। ब्याजदर तोकिएको समयमा ब्याजदर र आवश्यक किस्ता दुवै परिवर्तन हुँदैनन्।
यसको विपरित, एक चर दर धितो ऋण कुनै पनि समयमा परिवर्तन हुन सक्छ। ऋणदाताहरूले ऋणसँग सम्बन्धित ब्याज दर बढाउन वा घटाउन सक्छन्। ब्याज दर अष्ट्रेलियाको रिजर्भ बैंक, साथै अन्य कारकहरूले गरेका निर्णयहरूको प्रतिक्रियामा परिवर्तन हुन सक्छ। यदि ब्याज दर बढ्यो भने आवश्यक न्यूनतम चुक्ता रकम बढ्नेछ, र यदि ब्याज दर घट्यो भने घट्नेछ।
एक न्यायाधीशले ग्राहकलाई जान बाध्य पारेकोमा एयर यूरोपालाई गाली गरे ...
के मसँग काममा धितोमा हस्ताक्षर गर्ने अनुमति छ?
के उनीहरूले मलाई धितोमा हस्ताक्षर गर्दा डिडको प्रतिलिपि दिन्छन्?
के म धितोमा हस्ताक्षर गर्नु अघि ब्याक आउट गर्न चाहन्छु?
के तिनीहरूले मलाई धितो अध्ययनको लागि हस्ताक्षर गर्न सोध्छन्?
के म धितोमा हस्ताक्षर गर्न काममा घण्टा पाउँछु?
सुरक्षा त्रुटिहरू पत्ता लगाउन चेतावनी दिनुहोस्